यस्तो पो रहेछ काठमाण्डौं आउँदा जाँदा पृथ्वी राजमार्गबाट देखिने अनौठो घरको वास्तविकता (पुरा भिडियो) -
यस्तो पो रहेछ काठमाण्डौं आउँदा जाँदा पृथ्वी राजमार्गबाट देखिने अनौठो घरको वास्तविकता (पुरा भिडियो)
Posted on June 12, 2019 by Npnews
काठमाडौँ । राजधानी भित्रन होस् वा बाहिरीन सबैभन्दा व्यस्त मार्ग हो, पृथ्वी राजमार्ग । दिन होस् या रात, यो राजमार्गले कहिल्यै फुर्सद पाउँदैन । किनकी हरेक दिन हजारौं सवारी साधन अनि लाखौं यात्रु यही सडक प्रयोग गर्छन् ।
कुरा राजमार्गको होइन, यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्दा देखिने थाक्रे गाउँपालिकाको केवलपुरमा रहेको एउटा घरको हो । नौबिसेबाट ५ किलोमिटर पर कृष्ण मन्दिरको ठ्याक्कै पारीपटी वरिपरी हरियो वन, पाखामै देखिन्छ चिटिक्कको भवन, हेर्दै थाहा हुन्छ त्यो भवनमा खर्चिएको छ ठूलो धन ।
मुग्लिनतर्फ जाँदै गर्दा यो एक्लो घर हेर्दिन भन्दा पनि जो कोहीको आँखा पुग्छ । किनकी यो घरको स्वरुप नेपालमा देखिँदै आएको घरहरुको भन्दा अलग्गै छ । राजमार्गको पारीपट्टी, गतिलो सडक पनि नपुगेको ठाउँमा किन, कसरी र कसले बनायो होला त यति सुन्दर घर ? कौतुहलता मेटाउन र वास्तविकता बुझ्न भिडियो हेर्नुहोस् ।
भ्रस्टाचारको बिरुद्द कडा रुपमा उत्रिएका सरकारी कर्मचारी प्रेम संजेलको कार्यालय पुग्दा देखियो यस्तो कडा स्वभाव, कर्मचारीलाई यसरी कडा निर्देशन दिन्छन (पुरा भिडियो)
विराटनगर। विराटनगर श्रम कार्यालयका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताएका छन् ।
आफु भ्रष्टचारबिरोधी रहेकोले आँफैले भ्रष्टाचार गर्न सोच्न पनि नसक्ने बताउँदै संजेलले यदि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताएका हुन् ।
निर्वाचन कार्यालय मोरङमा रहँदा हाजिर नगरी एक महिना सात दिनको तलब, भत्ता र खाजा खर्च बुझेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्जेललाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।
शुक्रबार अख्तियारमा बयान दिने तयारीमा रहेका सञ्जेलले भने,‘ प्रेम सञ्जेल भष्ट्राचारविरोधी हो, यदि मैले भ्रष्टाचार गरेको कसैले प्रमाणित गर्छ भने टुँडिखेलमा झुण्ड्याइदिए हुन्छ ।’
निर्वाचन कार्यालय विराटनगरको प्रमुख हुँदा पनि सञ्जेलको समय नपुगी सरुवा भएको थियो । निर्वाचन कार्यालयको नयाँ भवन चुहिएपछि भवन निर्माण गर्ने ठेकदारको भुक्तानी रोकिदिएका कारण आफ्नो सरुवा भएको सञ्जेलको दाबी छ ।
त्यसबेला पनि सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएका उनले निर्वाचन कार्यालयमा दुई वर्ष बिताए । अदालती प्रक्रियामा रहँदा उनले २०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म कार्यालयमा हाजिर गरेका थिएनन् । अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका उनले हाजिर नगरेको अवधिको पनि तलब र भत्ता बुझेका उनीमाथि आरोप लागेको छ ।
पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नियमअनुसार नै भत्ता बुझेको सञ्जेलको दाबी छ । उनले भने ‘मैले अदालतको आदेश अनुसार नै भत्ता खाएको हो ।’
प्रेम संजेलको कार्यालयमा पुग्दा उनको कार्यसम्पादन यसरी भएको देखियो । भिडियो हेर्नुहोस :
पक्राउ परेका ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीको सबै झुठको पर्दाफास : उनि पढेको स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आए मिडियामा, खोले होस उड्ने ग्राउण्ड रियालिटी (पुरा भिडियो)
काठमाडौँ । भूकम्प आउँछ भनेर अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको गौशालाबाट अर्जुन क्षेत्रीलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार भोजपुरका जरायोटार घर भई काठमाडौँ सिनामङ्गल बस्ने अर्जुनकुमार थापा क्षेत्रीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यसै बीच अर्जुन क्षेत्री पढ्ने स्कुलका ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष मिडियामा आएका छन । तिन दिन अगाडी मात्र अर्जुनको आमालाई भेटेका उनले अर्जुनको सबै वास्तविकताको खुलासा गरेका छन । यो कुरा सुन्दा नेपालीहरु कत्ति सम्म सोझा हुदा रहेछन भन्ने प्रमाणित पनि हुन्छ । एउटा किशोरले लाखौ मानिसहरुलाई हचुवाको भरमा आफ्नो इशारामा नचाउन सकेको देख्दा विश्लेषकहरु अचम्मित भएका छन । विभिन्न माताको पछी लाखौ मानिसहरु आखा चिम्लेर लाग्नु र अर्जुन क्षेत्री उर्फ अर्जुन थापाको काण्डले नेपालमा कति धेरै अन्धविस्वासीहरु रहेका छन भन्ने तितो सत्यको प्रमाणित गर्दछ ।
अर्जुन पढेको स्कुलको ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्षसंग आज गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :
पछिल्लो पटक संगै पढ्ने साथी अर्जुन क्षेत्रीको वास्तविकता बताउन मिडियामा आएका छन । उनिसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :
ज्योतिष शास्त्र माथि नै धावा बोलेको आरोप
अर्जुन क्षेत्रीको हचुवा भविश्यवाणी देखेपछी ज्योतिष क्षेत्र कै बद्नाम भएको भन्दै ज्योतिष महासंघ लगायतका सम्बन्धित संघ संस्थाहरु नै उनि बिरुद्द लागेका थिए । यसको बिरोध गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् पोखराका ज्योतिषी कमल पौडेल । उनले ज्योतिष क्षेत्र कै बद्नाम भएको भन्दै अर्जुन क्षेत्री बिरुद्दको अभियान नै चालेका थिए ।
अन्तत बिना आधार अफवाह फैलाएर जनतामा सन्त्रास फैलाएको भन्दै अर्जुन क्षेत्रीलाई पक्राउ गरेपछि ज्योतिषी कमल पौडेल पुन फेसबुकको लाइभमा आएर पछिल्लो अपडेट दिएका छन ।
नेपालमा फेरि शक्तिशाली भूकम्प आउने भूगर्भविद्को नयाँ खुलासा, काठमाडौं नै उच्च जोखिममा ! (पुरा भिडियो)
काठमाडौँ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकका सोमनाथ सापकोटाका अनुसार नेपालमा फेरी पनि ठुलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । भूकम्पविदले गरेको अध्ययनले पनि नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको देश हो । तिब्बतिय र भारतीय प्लेटको मिलन बिन्दु नेपाल रहेको हुनाले यो क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ ।
प्राइम टेलिभिजनमा कुरा गर्दै महानिर्देशक सापकोटाले भने सैयौ वर्ष देखि शक्ति संचय भएको हुनाले कुनै पनि समय भूकम्प जान सक्छ । उहासंग गरिएको कुराकनी हेर्नुहोस :
समृद्धिका लागि तीनवटै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल